မြန်မာအရေးကို တခြားနိုင်ငံသားတွေ ပိုပြီးသတိထား မိလာစေရေးအတွက် နယူးယောက်မြို့က Time Square မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်….. – Cele Snap
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…..သရုပ်ဆောင် ဥက္ကာမင်းမောင်ကတော့ ပြည်ပနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကာ အလုပ်လုပ်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခွင့်မရတာကြောင့် ဝမ်းနည်းနေတာပါ။ဒါပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာ မျက်နှာမှတစ်ဆင့်လည်း နေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းတွေကို ဝေမျှပေးနေပြီးဗီဒီယိုဖိုင်များဖြင့်ပါ speak out လုပ်ပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း သူနေထိုင်ရာ နယူးယောက်မြို့ Time Square မှာ ပြုလုပ်တဲ့ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် တစ်တပ်တစ်အားပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို သူ့ရဲ့ Facebook Page တွင် တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကလည်း ” ဒီ​နေ့ New York City က Times Squareမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒ ထုတ်​ဖော်ပွဲပါ.. Times Square လို ​နေရာမျိုးမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက Tourist ​တွေ နှစ်စဉ်သန်းနဲ့ချီလာသလို ဒီ​နေ့လည်း အများကြီးရှိနေပြီး မြန်မာ့အ​ရေးကို တခြားနိုင်ငံသားတွေ ပိုပြီး သတိထား မိလာ ​စေတဲ့ အတွက် ဒီ​နေ့ Times Square မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အိုင်ဒီယာ​လေး ကိုလည်း သ​ဘောကျတဲ့အကြောင်း ကိုလည်း ရေးသားထားတာပါ။
ဒါ့အပြင်သူတို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့ နေရာမှာ လူ​တွေ အုံ​နေပြီး မြန်မာပြည်အတွက် အလှူ​​ငွေ​ တွေလည်း ကောက်ခံရာမှာလည်း တော်တော်များများရခဲ့သည်ကိုကြားသိခဲ့ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာမိကြောင်းနဲ့ သူကိုယ်တိုင်လည်း တတ်နိုင်သ​လောက် မြန်မာပြည်က ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း​တွေ တခြားဒုက္ခ​ရောက်တဲ့သူ​တွေ အတွက်ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း
Hear the voices of New York Burmese Community joining the fight against Military régime!
The Military dictatorship must fail!
Democracy in Burma must be restored!
Our leader Daw Aung San Suu Kyi must be free!
#CrimesAgainstHumanity ” ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေ သိရှိရအောင် တင်ပေးထားတဲ့အတွက် ဥက္ကာမင်းမောင်ရဲ့သတင်းကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
ပရိတျသတျကွီးရေ…..သရုပျဆောငျ ဥက်ကာမငျးမောငျကတော့ ပွညျပနိုငျငံတှငျ နထေိုငျကာ အလုပျလုပျနသေူ တဈဦးဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံတှငျ လကျရှိ ဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထုလှုပျရှားမှုမှာ ကိုယျတိုငျပါဝငျခှငျ့မရတာကွောငျ့ ဝမျးနညျးနတောပါ။ဒါပမေယျ့လညျး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာ မကျြနှာမှတဈဆငျ့လညျး နစေ့ဉျဖွဈပျေါနတေဲ့ သတငျးတှကေို ဝမြှေပေးနပွေီးဗီဒီယိုဖိုငျမြားဖွငျ့ပါ speak out လုပျပေးနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျကလညျး သူနထေိုငျရာ နယူးယောကျမွို့ Time Square မှာ ပွုလုပျတဲ့ မွနျမာ့အရေးလှုပျရှားမှုတှငျ တဈတပျတဈအားပူးပေါငျးပါဝငျနတေဲ့ ပုံရိပျတှကေို သူ့ရဲ့ Facebook Page တှငျ တငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူကလညျး ” ဒီ​နေ့ New York City က Times Squareမှာ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ ဆန်ဒ ထုတျ​ဖျောပှဲပါ.. Times Square လို ​နရောမြိုးမှာ တဈကမ်ဘာလုံးက Tourist ​တှေ နှဈစဉျသနျးနဲ့ခြီလာသလို ဒီ​နလေ့ညျး အမြားကွီးရှိနပွေီး မွနျမာ့အ​ရေးကို တခွားနိုငျငံသားတှေ ပိုပွီး သတိထား မိလာ ​စတေဲ့ အတှကျ ဒီ​နေ့ Times Square မှာ ပွုလုပျတဲ့ အိုငျဒီယာ​လေး ကိုလညျး သ​ဘောကတြဲ့အကွောငျး ကိုလညျး ရေးသားထားတာပါ။
ဒါ့အပွငျသူတို့ဆန်ဒထုတျဖျောတဲ့ နရောမှာ လူ​တှေ အုံ​နပွေီး မွနျမာပွညျအတှကျ အလှူ​​ငှေ​ တှလေညျး ကောကျခံရာမှာလညျး တျောတျောမြားမြားရခဲ့သညျကိုကွားသိခဲ့ရတဲ့အတှကျ ဝမျးသာမိကွောငျးနဲ့ သူကိုယျတိုငျလညျး တတျနိုငျသ​လောကျ မွနျမာပွညျက ပွညျသူ့ဝနျထမျး​တှေ တခွားဒုက်ခ​ရောကျတဲ့သူ​တှေ အတှကျပါဝငျလှူဒါနျးခဲ့ကွောငျး
#CrimesAgainstHumanity ” ဆိုပွီး ပရိသတျတှေ သိရှိရအောငျ တငျပေးထားတဲ့အတှကျ ဥက်ကာမငျးမောငျရဲ့သတငျးကို တဈဆငျ့ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။